Iziphumo zotyalo-mali kurhulumente omtsha e-Itali | Ezezimali
Iziphumo zotyalo-mali kurhulumente omtsha e-Itali
Ewe, imiqondiso emibi kwiimarike zezemali ihleli e-Itali. Ngenxa yorhulumente omtsha oza kusekwa phakathi kwe-5 Star Movement kunye neLa Liga. Ukuza kwinqanaba lokuba ipremiyamu yomngcipheko ngokubhekisele kwiJamani ifikelele kumanqaku ayi-185 kwaye umahluko phakathi kwento ehlawulwa yiRoma neMadrid ifikelela kwinqanaba eliphezulu kwiminyaka emithandathu. Ngayiphi na imeko, inye into icace gca kwaye yile nto intsha yezopolitiko inokuba nefuthe lakho utyalo mali ukususela ngoku ukuya phambili. Ayisiyiyo kuphela imali, kodwa ikwafumana ingeniso esisigxina kunye nezinye iindlela zotyalo-mali.
Imeko yangoku eza ngeli xesha lobomi bezopolitiko e-Italiya inokubonakalisa kakhulu kutyalo-mali lwakho. Ubuncinci ukuya kuthi ga ixesha elifutshane kwaye ukuya kwinqanaba lokuba inokwenza ukuba ulahlekelwe okanye ufumane imali kuxhomekeke kwisicwangciso oza kusisebenzisa ukusukela ngoku. Enye yeziphumo zokuqala ezinokubakho kwiimarike zezabelo. Njengokuba kusenzeka kwezi ntsuku, ngaphandle kwento yokuba intshukumo ayinamandla kangako, njengoko bekulindelwe kwasekuqaleni ziiarhente ezahlukeneyo kunye nabalamli bezemali.
Ngale ndlela, awungekhe uyilibale loo nto Uqoqosho lwase-Itali lolwesithathu ye-European Union kunye nayo yonke into eyenzekayo kuyo inokuba nefuthe ngqo kwaye kwangoko kwiSpanish. Ukuzimela phakathi kwayo kukhulu kwaye konke okwenzekayo kwiimarike zase-Italiya ekugqibeleni kuya kwelilizwe. Kwelinye icala, iimpembelelo ezinokuthi zibe nazo kumaziko oluntu nazo zibaluleke kakhulu kwaye kuya kufuneka ungenelele kwimisebenzi yakho ukuze igalelo lezoqoqosho olisebenzisayo ukwenza ukonga kwakho ukuba lenze inzuzo ukusukela ngoku ukuya phambili lingaphumi.
1 Kwenzeka ntoni e-Itali?
2 Ukuhamba ezantsi kwimarike yemasheya
3 Impendulo kwimarike yemali
4 Ingeniso esisigxina: abona basesichengeni
5 Fumana ezinye iimodeli
6 Utyalomali kwioyile
Kwenzeka ntoni e-Itali?
Imalunga norhulumente ongathandiyo kwiimarike zezemali kwaye ke impendulo yabo ayinakuba yinto elungileyo, njengoko kusengqiqweni ukuyiqonda. Enye yeemarike zezemali ezichaphazelekayo ngokungathandabuzekiyo yimarike yemasheya. Ngale mihla i-Italiyane yeyona nto bohlwaywe ngayo kuzo zonke izalathiso zelizwekazi lakudala. Ngokwehla kwexabiso nge-1%. Ngokubhekisele kwisalathiso sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, intshukumo khange iqatshelwe kwezi ntsuku zoxinzelelo phakathi kweearhente zezemali. Kwaye inikezele kuphela ngeepesenti ezimbalwa.
Nangona, ewe, okona kubi kwiimarike zesitokhwe kunokuza kwiintsuku okanye kwiiveki ezimbalwa ezizayo kwaye kuxhomekeke kwinkqubo esebenza ngayo umphathi omtsha wase-Italiya. Ngale ndlela, kuya kufuneka uyazi kakuhle yonke into eyenzekayo kule nxalenye yeYurophu. Apho ixabiso lecandelo lezemali kunye neebhanki ngokubanzi zinokuba zezona zonakalisayo zezi zicwangciso zopolitiko ziphuhliswe ngurhulumente waseMovimiento 5 Estrellas naseLa Liga. Awulahlwanga amathontsi engxoweni yobunzulu obuthile obunokuthatha ii-euro ezininzi apha endleleni ukuba uvula izikhundla kwimarike yemasheya kwezi ntsuku.
Ukuhamba ezantsi kwimarike yemasheya
Ewe kunjalo, yeyona meko inokuqikelelwa ukuba la maqela mabini ezopolitiko ayayisebenzisa inkqubo yawo ukusukela ngoku. Kuyo nayiphi na imeko, kuya kufuneka jonga ubude bayo kunye nobunzulu ukujonga ukuba kufanelekile na ukuba semngciphekweni wokuvula izikhundla kwezi marike zezimali. Ngaphandle kobuchwephesha bobuchwephesha ukuba iingxowa zikhona ngalo mzuzu kanye. Ingcebiso eluncedo kakhulu kwezi ntsuku kukuhlala kude kwiimarike ukuhlalutya ukuba yintoni uguquko lwazo ukusukela ngoku.
Enye into ekufuneka uyivavanyile kukuba ukuguquguquka iya kwanda kakhulu ngoku ukusukela ngoku. Umahluko obanzi phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye neyona isezantsi kwaye ukuba kunokuba yinto enomdla kakhulu ekwenzeni imisebenzi yorhwebo. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uzise amava amaninzi kwiklasi yesimo ukuze imisebenzi iphuculwe ngempumelelo ngakumbi kunakwamanye amaxesha. Ayothusi into yokuba abanye babahlalutyi abadumileyo bezezimali bathi ungaphulukana nenzuzo engaphezulu ngokuvula izikhundla kwezi ntsuku. Ungalibali ukuba awufuni izinto ezingalindelekanga ngaphambi kokuqala iholide yakho.
Impendulo kwimarike yemali
Ewe enye yezona zinto zisengozini kwezemali kulwakhiwo lukarhulumente e-Itali yimali. Ukuya kwinqanaba lokuba enye yezona zihamba phambili kwezi ntsuku. Ngokukodwa, ngokubhekisele kutshintsho ngqo phakathi kwedola yaseMelika kunye neyuro. Ngeentshukumo eziphazamisayo ezisetyenziswa ngabacebisi ukufumana inzuzo enkulu kwimisebenzi yabo kwiimarike zemali. Akumangalisi ukuba amandla emali yaseMelika yenye yezona zinto zixhaphakileyo kule mihla kunye neendaba zento eyenzekayo e-Itali.
Ngomnye umthambo, kufanele kuqatshelwe ukuba le marike ikhethekileyo kakhulu yezemali ithambekele kakhulu kuwe ekubeni ukwazi ukufumana imali eninzi ngexesha elifutshane kakhulu. Ngomngcipheko kwimisebenzi ehlala ihleli. Ukuza kuthi ga ngoku ayizontshukumo ezifanelekileyo kuzo zonke iinkangeleko yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, kuya kufuneka ube namava amahle kolu hlobo lokusebenza kwiimali zamanye amazwe. Ngaphandle komsebenzi wayo omkhulu kwezi ntsuku kwaye ngakumbi ngokubhekisele kwi-euro.
Ingeniso esisigxina: abona basesichengeni
Kodwa akuthandabuzeki ukuba iimarike zengeniso esisigxina zezona zichaphazeleka kakhulu sisiphithiphithi esikwilizwe laseLatin. Ayothusi into yokuba inzuzo ye- ivawutsha yase-Itali inyuke kakhulu kule mihla. Ukuya kwinqanaba lokuba inefuthe kwinzuzo yeebhondi zepheripher. Ngokwenyani oku kuthetha ukuba imali yotyalo-mali yezi mpawu ilahlekelwa kukhuphiswano njengoko zisokola kakhulu kolu hlobo lokuhamba kwiimarike zemali. Kule meko, akusayi kubakho khetho ngaphandle kokubaleka kwingxowa mali yotyalo mali esisigxina esekwe kumazwe angaphandle. Apho i-Itali yenye yezona zinto zithatha isigqibo.
Olu hlobo lweemali ezihlangeneyo luyehla ngokunyaniseka okukhulu. Ngeepesenti ezithile ezingathandekiyo ezidlula ezo zeemali zotyalo-mali eziguqukayo. Ngale ndlela, kukhuselekile ukubekwa kwimarike yemasheya kunakwingeniso esisigxina ngeli xesha. Ukongeza, uninzi lwezi mveliso zezemali idityaniswe nezinye iiasethi zemali ezinokuxolisa ilahleko ezinokubakho kwizikhundla zakho. Awungekhe ulibale ukuba imali yotyalo-mali yezi mpawu yenye yezona zilahlekileyo zinokwenzeka e-Itali ukusukela ngoku.
Fumana ezinye iimodeli
Ewe, xa unikwe le meko inzima, ayigwetywanga ukuba ukhetha uthotho lotyalo-mali olujongwa njengezinye iindlela. Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba banokuthi basebenze njengamaxabiso okusabela kule meko yezopolitiko yenziwe kwindawo eqhelekileyo yaseYurophu. Enye yazo imelwe yintsimbi exabisekileyo ngokugqwesa, njenge oro. Ukongeza, ihamba imeko yobuchwephesha enomdla kakhulu ukuyivavanya xa kuvulwa izikhundla. Ayothusi into yokuba inomdla wokuhlaziya onokuwasebenzisa ngoku.
Olunye ukhetho ekufuneka ulunqobe kwesi saqhwithi kwilizwe elingummelwane luyinto ebonakalayo Ukuxhaswa kwemali-based based based volatility. Kungenxa yokuba banokusebenzisa ithuba elingathandekiyo kwiimarike zokulingana. Nangona usikelwe umda ekuphelisweni kwezikhundla okoko ubeka umngcipheko wokuziyeka, njengoko abatyali mali abancinci nabaphakathi bephikisana kwijoggon yabo. Ngalo lonke ixesha abaphathi bephuhlise imali yezi mpawu kwaye zithengiswa phantsi kweeparameter ezahlukeneyo zenzuzo kwaye kutheni zingatsho, njengesicwangciso sotyalo-mali.
Okokugqibela, kukwakho nendawo yokugcina izinto kwindawo ekrwada ezinje ngeoyile uqobo, ekhulisa irali enamandla kakhulu. Ngexabiso elisondele kwiidola ezingama-80 umphanda. Kwaye unokuvula izikhundla ngokusebenzisa iinkampani zeoyile ezidweliswe kwiindices ezahlukeneyo zamasheya. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba lelinye lawona maxabiso acetyiswayo kulo nyaka. Umzekelo, Repsol edityaniswe kwizabelo zaseSpain.
Nokuba yeyiphi na, yenye yezona ndlela zokwenza inzuzo ukuba ufuna ukwenza imali oyongelayo xa ujongene nezidubedube zezopolitiko nezentlalo ezinokuveliswa kweli lizwe libalulekileyo laseYurophu. Ayothusi into yokuba inzuzo ebonelelwa yile asethi yemali okwangoku iphindaphindwe kabini. Into ezinye iindidi zotyalo mali ezinganiki yona, nkqu nemarike yestokhwe ngokubanzi. Nangona eyona nto imbi kakhulu kukuba kusenokwenzeka ukuba emva kwexesha kungene izikhundla zabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Iziphumo zotyalo-mali kurhulumente omtsha e-Itali
Ii-mobiles zaseTshayina zifumana isabelo sentengiso eSpain